mioty ovy - magazine "Potato System"
Tena Label ny fijinjana ovy
Label: ny fijinjana ovy
Ny vokatry ny fiotazana ovy dia namintina tao amin'ny Faritanin'i Stavropol
Tamin'ny taona 2021, ovy 6 arivo taonina no nojinjaina tamin'ny 142,7 arivo hektara miaraka amin'ny salan'isa 257 c/ha. Hetra lehibe amin'ny...
Ao amin'ny faritr'i Moskoa, ovy 73,3 arivo taonina no voajinja mihoatra ny tamin'ny taon-dasa
Ny serivisy ho an'ny mpanao gazety an'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Sakafo ao amin'ny Faritra Moskoa dia mitatitra fa 2021 arivo taonina no nangonina avy amin'ny sahan'ny faritra tamin'ny 363,1 ...
Nahazo vokatra ovy voarakitra an-tsoratra ny Agrarians of Buryatia
Tamin'ny taona 2021, ovy 132 arivo taonina no nojinjaina tany Buryatia, io no isa ambony indrindra hatramin'ny 2013 (avy eo dia 132,2 ...
Nifarana tao amin'ny faritr'i Irkutsk ny hetsika fijinjana
Ilya Sumarokov, Minisitry ny Fambolena ao amin'ny Faritra Irkutsk, dia niresaka momba ny vokatra vonjimaika tamin'ny 2021 nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tao amin'ny masoivohom-baovao Interfax. ...
Mijinja ovy ao amin'ny Faritanin'i Stavropol
Tamin'ny faran'ny volana oktobra dia nijinja 4,6 arivo hektara ireo mpamokatra fambolena ao amin'ny faritra, izany hoe 77% amin'ny drafitra. Nijinja ovy 120,3 arivo taonina ny agrarians...
Ny fivoaran'ny sehatry ny agraria ao amin'ny faritr'i Nizhny Novgorod dia nankasitrahana fatratra tamin'ny ambaratonga federaly
Dzhambulat Khatuov, minisitra lefitra voalohan'ny fambolena ao amin'ny federasiona rosiana dia nanao fitsidihana niasa tamina faritry Nizhny Novgorod. Nihaona tamin'ny mpamokatra legioma Nizhny Novgorod, ...
Mandrahona ny tsy fahampian'ny vokatra ovy ny toetr'andro
Raha ny filazan'i Rosstat, ny vidin'ny ovy any Rosia dia niakatra tamin'ny herinandro faharoa nisesy. Amin'izao fotoana izao, ny vidin'ny fivarotana ho azy dia avo kokoa amin'ny ...
Snow dia mety hanomboka amin'ny voalohan'ny volana septambra any amin'ny faritra maro ao amin'ny Federasiona Rosiana
Araka ny vinavinan'ny foibe Phobos, ny oram-panala voalohany dia mety miandry ny mponina amin'ny faritra sasany any Russia amin'ity herinandro ity. Any amin'ny faritra Avaratra Andrefana 3-5 ...
Mitohy ny fampielezana vokatra any amin'ny faritra Samara
Hatramin'ny 18 Aogositra, ny fijinjana varimbazaha dia 1,76 tapitrisa taonina ary 17,4 c / ha ny salan'isan'ny vokatra. Mihoatra ny 1,1 tapitrisa ...
P. 1 amin'ny 8 1 2 ... 8 Manaraka
Mafy miaraka amin'ny fahasahiranana fanampiny
Ny tsenan'izao tontolo izao dia manatratra ny avo lenta